Abesilisa futhi zidinga ukunakekelwa, ikakhulukazi uma bakhetha sikhule intshebe futhi amadevu. Futhi ukuze basize kule divayisi yesimanje - kusilungisi ukuze izindevu. Izibuyekezo of the amamodeli emakethe yabo eningi, gxila kulokho ufundwa emhlabeni wonke futhi esiwusizo ukusebenzisa kudivayisi.
Kusilungisi othile, ingase ibonakale iyisikhathi kudivayisi ezingadingekile. Kodwa uma nentshebe ukuphi - accessory imfashini, kufanele kahle basinakekele. ukushefa Permanent asisho londoloza, ngoba awulona isikhathi esanele. Ngakho ukhululeke ukuthenga icwecwe, kodwa kulula kakhulu ukusebenzisa kusilungisi ukuze izindevu futhi amadevu. Izibuyekezo ingakusiza ukuba akhethe, kodwa sinikeza umqondo wayo yezingxenye ezinkulu kudingeka sinake lapho ukhetha.
Kusilungisi yidivayisi ukuze ilungiswe izindevu wasinikeza ukuma efiselekayo, okuyinto wenza sikwazi ukufeza kwekhanda yokuqala ekhaya. Ukuba yizinhlobonhlobo evumela ukusebenzisa kwayo i-izinwele edging entanyeni noma ekubumbeni we amadevu noma amashiya. Abanye onobuhle Ungasusa uboya obungathandeki kusukela izindlebe noma ikhala. Lapho ekhetha, cabanga:
ukusebenza yayo isikhathi ngaphandle lingatshajwa.
Inombolo nezinamathiselo kuhlanganisiwe.
Ubude ukwelashwa izinwele - minimum futhi esiphezulu.
Lawa izici eziyinhloko ukuba ayicabangele lapho ekhetha kusilungisi nesilevu. Izibuyekezo ukugxila kulezi zici. Ake sihlole kubo ngokuningiliziwe.
Kusilungisi at compactness yayo futhi miniaturization abakwazi kuphela nentshebe yakho futhi aphuce, kodwa futhi usike, izinwele elincanyana, ukunikeza uhlobo oluthile ngesilevu noma amadevu. onobuhle Okuningi eziphambili uyakwazi ekubhekaneni izinwele engafuneki ekhaleni nezindlebe - le Imibhobho esemzimbeni okuhambisanayo ngokuvamile afakiwe. Kuyacaca ukuthi amakhono obusebenzayo ngaphezulu ukulungisa izobiza ngaphezulu, kodwa ngokuvamile, amanani kakhulu imodeli kuyinto ruble 5000-8000 ngemali ubuncane ruble 800-1000. Kulokhu, iningi models bayakwazi ukusebenza kokubili enethiwekhi ku ibhethri.
Ngokusho izibuyekezo zamakhasimende, lokhu isici - omunye wemizila ebaluleke kakhulu lapho ekhetha kusilungisi. Kodwa-ke kudlala indima, uma udinga imodeli okumsulwa ibhethri. Nokho, i-obusebenzayo kakhudlwana futhi esiwusizo kagesi nesilevu kusilungisi. Impendulo evela kumakhasimende basikisela ukuthi ngokwesilinganiso, imodeli ingasebenza imizuzu 45, kungabikho bedinga lingatshajwa. Kodwa, amanye amadivayisi, ezifana Philips QS6141 / 32, futhi bayakwazi Nokho, zifezeke imizuzu 75, ukuze ebayala ukuba ukushaja okugcwele kuthatha amahora angaba ngu-4.
Noma yimuphi amathiphu?
abakhiqizi yanamuhla ukunikela njengesibonelo elula nomunye umlomo wombhobho, namadivayisi esisetshenziselwa ukuthi ongenza imisebenzi ehlukene. brand abadumile - Philips, Panasonic - ukunikela idivayisi Imibhobho esemzimbeni amaningi avumela abantu izinwele nentshebe, amadevu ngombala, ukususa izinwele ngaphansi emakhwapheni.
Futhi babe umsebenzi ahlukene zanamuhla nesilevu kusilungisi. Izibuyekezo bathi izinhlobo eziningi ezinhle babe ezinye izici:
ikhono ukusebenza kusukela usikilidi ukuxegiselwa emotweni, okuyinto wenza sikwazi ukusebenzisa amadivaysi endleleni;
khona kwasemuva ihlanganiswe kusiza inqubo yokugunda;
Umshini System amadivayisi - isinqumo esihle, njengoba sostrizhennye izinwele nje matasa;
esikhundleni izindwani, khona okwandisa impilo insimbi;
ngenxa inkomba icala kungaqondakala uma idivayisi kumele avuselelwe.
Manje thina ukukunikeza uhlu ethandwa kakhulu phakathi abasebenzisi Ukunquma onobuhle lapho isikhalazo ukuze intengo-ukusebenza ratio.
indawo 1st. Remington
Uma udinga ngempela iyona engcono nesilevu kusilungisi, izibuyekezo zamakhasimende ukunikela ukuhlola Remington brand zikagesi. Remington MB6550 kungaba isipho esihle le ndoda njalo igade entshebeni yakhe. Le divayisi kwenza kube nokwenzeka ukuba usike entshebeni, kwenze kube isimo esithile. Model edonsela amakhasimende ihlanganiswe cleaner ubuchwepheshe, nezinwele ukuncela sostrizhennye esitsheni akhethekile.
Phakathi izinzuzo mthandazo oyisibonelo, abasebenzisi wazi:
isethi ephelele Imibhobho esemzimbeni ezimbili cleaner kanye nendinganiso eyodwa evumela ukuthi wena ukudala ezahlukene bobunjwa nesilevu; umlomo wombhobho ububanzi ingasetshenziswa ukusika noma thinning izinwele;
ephelele titanium enamathela blade;
ikhono ulungise ikamu-okunamathiselwe.
Kusilungisi ukuze izindevu, amadevu Remington wathola Izibuyekezo ezinhle futhi emaphaketheni compact, okuyinto kungenzeka ukuthatha endleleni. Phakathi nezikhathi ezimnandi abathengi bathi design zanamuhla futhi abulawe. Ngaphezu kwalokho, azikho izinkinga ukunakekelwa nokugcinwa imiyalelo.
Enye kusilungisi ngu Remington, lapho abasebenzisi uthi eziningi ezinhle. Ikakhulukazi amadoda stylish uye wazakhela idivayisi yesimanje ehlanganisa amandla design zanamuhla ne izixazululo kwezobuchwepheshe kanye emisha. Kubalulekile futhi ukuthi imodeli ifakwe touch screen digital - kunikeza ithuba ukusetha izilungiselelo ubude, ububanzi. Beard kusilungisi Remington wathola Izibuyekezo kuhle izici ezihlaba umxhwele: Ungasetha anobude obungalingani 175! Ngaphezu kwalokho, phakathi izinzuzo abasebenzisi uthi lithium ibhethri, lapho idivayisi ongasebenza up imizuzu 50 kuya. Ngenxa inzwa zobuchwepheshe zingalawulwa inqubo yokugunda.
Ngakho, izinzuzo zale divayisi zingancishiswa ohlwini olulandelayo. Kuyinto icwecwe ngobukhulu, sinamakhanda ezimbili, kahle igcinwe ukushaja futhi kwenza kube nokwenzeka ukunamathisela ezahlukene nesilevu ukuma. Kulaba minuses uqaphele engekho kungenzeka wokugeza ngaphansi empompini, umsebenzi ezinomsindo, izindwani ebukhali kakhulu.
Noma yimuphi esungulwe brand BaByliss nesilevu kusilungisi Izibuyekezo uthola okuhle njalo. Lolu phawu ikhiqizwa onobuhle mayelana 14, ngalinye elikwazi muhle. Baningi Izibuyekezo kuhle idivayisi waterproof BaByliss E835E. It has iziqondiso eziyisishiyagalombili ngabanye, okunamathiselwe ufuna ukushefa, haircuts izinwele emakhaleni nasezindlebeni, kungasetshenziswa njengoba egeza, ukusebenza kokubili enethiwekhi ku-intanethi. Ngenxa yobukhulu nebhethri ukusebenza kwawo amancane kungenzeka ukuthatha leli kusilungisi nge, isibonelo, ethathe lolu hambo.
Beard Umklami SH500E
Ngiqinisile zobuchwepheshe angabhekwa umfuziselo Beard Umklami SH500E. Lokhu kusilungisi ukuze izindevu futhi amadevu ithole Izibuyekezo kuhle wedwa yayo: kuba idivayisi yokuqala has a ikhanda ligijima. Ngakho, imodeli inama kahle eliphezulu, ijubane ukusebenza, izindwani kulo babe imimese double. Amakhasimende abakhetha sha BaByliss imikhiqizo, phakathi izinzuzo ukuhlukanisa induduzo kalula zokusebenzela, umsindo ongatheni, ukushaja esheshayo, elula futhi uhlelo okulula egeza. Umhlahlandlela metal linokwethenjelwa, izindwani abe enamathela titanium, okwandisa yempilo yabo.
kudivayisi Moser angabhekwa kalula omunye the best ngenxa yezinga lazo ezinhle futhi intengo imali. Phakathi izinzuzo lokugoqa abathengi bathi nezinamathiselo eziningana kanye izindwani replaceable. Nge inkimbinkimbi amamodeli design Site ukunakekelwa entshebeni, amadevu kanye sideburns. Beard kusilungisi Moser uthola Izibuyekezo kuhle imali eyanele ubude amazinga, okuyinto wenza sikwazi ukwenza ngesilevu yohlobo oluthile. imicabango yabantu abaningi ezinhle mayelana idivayisi Moser 1574-0050. Abathengi uqaphele ukuthi ngesikhathi intengo imali ke izici yesondlo lula, UKUQINA izinto futhi bewumsebenzi, izindlu ukhululekile, esinikela induduzo ilungiswe ukugunda izinwele. Mshini ihamba kahle, cishe ngaphandle komsindo. Enye inzuzo - ukusebenza kokubili enethiwekhi kusukela ibhethri.
indawo 4th. Philips
Okudalwe yilo ethandwa brand nesilevu kusilungisi Izibuyekezo lingama ezinhle. Kodwa ngenxa yezindleko ephakeme, siye wafaka Philips imikhiqizo brand endaweni 4th e simo yethu encane. Umugqa zingatholakala trimmers onobuhle ezahlukene kanye nezici. Abasebenzisi ukubuyekeza kwabo ukugxila kokufaneleka elandelayo onobuhle yalesi brand:
kungenzeka kokufaka ngokuthe ngqo ubude besikhathi, okwenza i bristle enhle;
Sebenza up imizuzu 60 we-AC noma ibhethri;
Ngamaphesenti angu-100 amanzi angangeni;
Ubuchwepheshe ezintsha laser eqondiswa.
Beardtrimmer chungechunge 9000
Lona stylish kunazo futhi ephelele Philips nesilevu kusilungisi. Izimpendulo ngaye sikhulise ukunakekela ingxenye zobuchwepheshe. Ngakho, lokhu idivayisi lokuqala ukusika entshebeni, okuyinto ifakwe ubuchwepheshe laser eqondiswa. Iphuzu elibalulekile yesibili - ke amanzi. Laser okuqondiswe - kuba ithuba ukudala bushelelezi futhi izinhlangothi zazo ziyalingana nesilevu umugqa. Ubude oyifunayo isethwe yezilungiselelo isondo ekhethekile. Kuhlanganiswa osayizi ezimbili umlomo wombhobho ezenza ukusingatha izindawo ezincane, njenge ngaphansi ekhaleni kanye naseduzane komlomo.
Ngokusho ukubuyekezwa, kusilungisi ekahle ephephile, futhi okubaluleke kakhulu, olunembile izindevu ilungiswe. Blades ziphephile futhi ukuba ukwazi ukudala haircut ephelele. Iyunithi lasekhanda kungenziwa wageza ngaphansi kwamanzi agelezayo.
Lokhu kusilungisi isebenziseka ngezindlela eziningi, icwecwe, kulula ukuyisebenzisa futhi enza izinto ezihlukahlukene kufanelekile angayisusi intshebe nokususa izinwele kusukela izindlebe noma ikhala yini. ProtecTube ubuchwepheshe innovative kuhlanganiswe engela elula unikeze inqubo esheshayo lula of ilungiswe. A security sici ngesimo Ukuvikelwa kungxenye ahlabayo. Injongo yalo - ukuvimbela ukucasuka kungenzeka kwesikhumba. Thanda trimmers eziningi Brands Philips, lokhu lungasetshenziswa emanzini. Ukwahlulela ukubuyekezwa, phakathi izinzuzo imikhiqizo yalesi brand ibhalwe usayizi compact, Imibhobho esemzimbeni amaningi, ukumelana umswakama, izinga womshini nasemhlanganweni. Phakathi nemibi Ukugcizelelwa ukungabikho inkomba Izinga lokushaja futhi isikhwama esincane, ngenxa okuyinto umhlahlandlela ibhulashi bayiphendule ezimbi kulo, okulenza inqubo hhayi wayegunda nesilevu ezimenza azizwe atjhaphulukile.
indawo 5th. Braun
On the 5th, sibala trimmers stylish Braun brand. Phakathi zako uphawu isikali abathengi ngokunemba high, okuyinto wenza sikwazi ukuqapha zonke izintshebe milimitha. Kuhlanganiswa ikamu ezimbili esikhiphekayo, ungalungiselela ubude wayefisa ibanga kulencane. Kusilungisi Emaceleni: kulolu hlangothi, kusivumela ukunikeza wayefisa nesilevu umumo, futhi ngakolunye - kungenziwa wasika ubude oyifunayo wentshebe. Ngenxa yokhalo ewumngcingo emsebenzini, akabe bend, futhi idivayisi esebenza ngokunembile.
Sanikeza wena ukuhlola owawuya ethandwa nesilevu kusilungisi ukubuyekezwa. Yikuphi okungcono ukuthenga idivayisi? We ukweluleka okusekelwe izidingo zakho kanye nezici obusebenzayo zedivayisi. Ngokwesibonelo, ukumane nje ukuze ilungiswe izindevu, ungakhetha ubude icwecwe futhi elula ngokuya zobuchwepheshe ukugcwaliswa imodeli. Futhi uma uhlela ukusebenzisa kusilungisi ukusika izinwele kanye izinwele ukususwa kusukela ekhaleni, kufanele sinake onobuhle obusebenzayo kakhudlwana.